Iza koa ny manaraka ? | NewsMada
Iza koa ny manaraka ?
Nosamborina, afakomaly, ilay mpandraharaha Maminirina Jean Eddy. Nanaraka azy, omaly, koa Rajaonah Mbola. Tonga ho azy ny fanontanian’ny mpanara-baovao : iza koa ny manaraka ? Dia rafitra mamoaka izay heviny sy ao an-tsainy, manaraka ny fironana, mazava loatra, ny olom-pirenena tsirairay. Rakotra fanehoan-kevitra ny tambajotran-tserasera « facebook ». Tsy maharaka ihany koa ny antso mivantana amin’ny onjampeo…
Anarana maro ny voatonontonona, ho manaraka eo. Ny iraisan’ireo ? Efa nisy raharaha nafampana nahavoasaringotra, nandritra ny fitondrana teo aloha. Ny sasany, raharaha efa niakatra fitsarana, saingy nangingina ny tohiny. Ny hafa kosa, mbola raharaha anaty fanadihadiana, na efa nisy fampiantsoana aza.
Ny olana, lasa mpanao gazety, mpisolovava fa indrindra, mpitsara avokoa ny olom-pirenena rehetra. Samy manana izay zoro iroritany ny tranga sy ny zava-misy. Misy tena mahasahy manondro ankitsirano ary tsy miafina mihitsy. Misy kosa anefa ireo mbola miaro ny efa namoahan’ny Fitsarana didy fa meloka tamin’ny zava-bitany.
Eo no mipetraka ny tena olana: iza ny tena hohenoina? Ny an’iza ny tena marina? Resy aloha ny tena mpanao gazety: vitan’ny olon-tsotra tamin’ny finday ny fakana ny sary, nanaovana ireo fisamborana indroa misesy ireo. Miparitaka vetivety tsy misy sivana, ary miraradraraka tsy voafehy ny fizarana sy ny fanehoan-kevitra mafana isan-karazany avy eo.
Manana ny fomba fiasany ny mpitandro filaminana. Toraka izany koa ny Fitsarana. Aleo hanaraka ny ambaratonga ka miandry ny valim-pitsarana ny rehetra mba tsy hisy ny mibolisatra. Fiovana ho amin’ny tsara ny ezaka sy tanjona amin’izao vanim-potoana izao ka aleo hanara-dalàna ny rehetra.
Sao mantsy hisy hanaraka ny tondro molotra isan-karazany ka hihainohaino eny akaikin’ny toeram-ponenana sy toeram-piasan’ireny olona ireny, mba haka ny sary voalohany…